Monday . 27 January . 2020
ပရိသတ္ေတြရဲ႕ စိုးရိမ္တၾကီး ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး နန္းဆုရတီစိုးနဲ႔ အဆိုေတာ္ G Fatt တို႕စံုတြဲေလးရဲ႕ အခ်စ္ေရးကေတာ့ ဒီရက္ပိုင္းမွ အက္ကြဲသံေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါေသးတယ္။နန္းဆုနဲ႕ G Fatt တို႔ကေတာ့ ခ်စ္သူသက္တမ္း (၂)ႏွစ္ေက်ာ္သည့္အထိ နားလည္မႈ ယံုၾကည္မႈေတြနဲ႔ လက္တြဲလာခဲ့ၾကျပီး လက္ရိွမွာေတာ့ ျပႆနာနည္းနည္းရိွလာတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြက စိတ္ပူေနၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
အနုပညာညီအစ္မ၊လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္တဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ မေအးေသာင္းကေတာ့ သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္နာမွ G Fatt နဲ႔ဆံုတုန္းေလးရိုက္ကူးထားတဲ့ ပံုရိပ္ေလးနဲ႔အတူ “ဆရာစံေျမးေလးနဲ႔ေတြ႕တုန္း အသဲကြဲသီခ်င္းေလးေတြေမွ်ာ္ေနမယ္ေနာ္။ ကိုယ္က အသဲကြဲတဲ့ ဖီလင္ႀကိဳက္လို႔ ပါ။” လို႕ တင္ခဲ့တဲ့အေပၚ နန္းဆုနဲ႔G Fatt တို႔စံုတြဲေလးကိုခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ေ၀ဖန္မႈေတြရိွလာခဲ့ပါတယ္။နန္းဆုဘက္ကလည္း” ပရိသတ္ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္နဲ႕လည္း ခင္ေနလ်က္သားနဲ႕ ဝမ္းသာအားရျပတာမ်ိဳး စေနာက္တာမ်ိဳး က်ေတာ့ ေဒါသထြက္မိတယ္ ။ သူမ်ားႏွလံုးသားေတြနဲ႕ ရင္းႏွီးထားရတဲ့အရာကို ဘယ္ေတာ့မွ စေနာက္တာ ပ်က္ရယ္ျပဳတာကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္ ။ ကိုယ္သာဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ အခုလို လုပ္မွာမဟုတ္သလို သူမ်ားအတြဲေတြ အဆင္ေျပေအာင္ရင္ ၾကားေစ့ေပးမိမွာပါ ။
အဲဒီPost ကို ျမင္လိုက္ရခ်ိန္မွာ ဒါ ငါဘယ္ေတာ့မွ သူတစ္ပါးကုိ မလုပ္ရမယ့္ အရာဆိုတာ သင္ခန္းစာ ရလိုက္တယ္”လို႕ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ေျဖၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။နန္းဆုနဲ႔ G Fatt တို႔ စံုတြဲေလးကိုခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ မေအးေသာင္းအခုလို တင္ထားတဲ့အေပၚမွာ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသျဖင့္ မေအးေသာင္းရဲ႕ ပိုစ့္ကို Share ျပီး ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေနၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ပရိသတ္ၾကီးေရ နန္းဆုနဲ႔ G Fatt တို႔ အခ်စ္ေရးကေတာ့ ျပႆနာေတြနဲ႕ပဲ ၾကံဳေတြ႕ေနရတာေနာ္။
ပရိသတ်တွေရဲ့ စိုးရိမ်တကြီး စောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန်းဆုရတီစိုးနဲ့ အဆိုတော် G Fatt တို့စုံတွဲလေးရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ ဒီရက်ပိုင်းမှ အက်ကွဲသံတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။နန်းဆုနဲ့ G Fatt တို့ကတော့ ချစ်သူသက်တမ်း (၂)နှစ်ကျော်သည့်အထိ နားလည်မှု ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ လက်တွဲလာခဲ့ကြပြီး လက်ရှိမှာတော့ ပြဿနာနည်းနည်းရှိလာတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက စိတ်ပူနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာညီအစ်မ၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မအေးသောင်းကတော့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နာမှ G Fatt နဲ့ဆုံတုန်းလေးရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးနဲ့အတူ “ဆရာစံမြေးလေးနဲ့တွေ့တုန်း အသဲကွဲသီချင်းလေးတွေမျှော်နေမယ်နော်။ ကိုယ်က အသဲကွဲတဲ့ ဖီလင်ကြိုက်လို့ ပါ။” လို့ တင်ခဲ့တဲ့အပေါ် နန်းဆုနဲ့G Fatt တို့စုံတွဲလေးကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ဝေဖန်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။နန်းဆုဘက်ကလည်း” ပရိသတ် မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်နဲ့လည်း ခင်နေလျက်သားနဲ့ ဝမ်းသာအားရပြတာမျိုး စနောက်တာမျိုး ကျတော့ ဒေါသထွက်မိတယ် ။ သူများနှလုံးသားတွေနဲ့ ရင်းနှီးထားရတဲ့အရာကို ဘယ်တော့မှ စနောက်တာ ပျက်ရယ်ပြုတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် ။ ကိုယ်သာဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ အခုလို လုပ်မှာမဟုတ်သလို သူများအတွဲတွေ အဆင်ပြေအောင်ရင် ကြားစေ့ပေးမိမှာပါ ။
အဲဒီPost ကို မြင်လိုက်ရချိန်မှာ ဒါ ငါဘယ်တော့မှ သူတစ်ပါးကို မလုပ်ရမယ့် အရာဆိုတာ သင်ခန်းစာ ရလိုက်တယ်”လို့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖြေကြားခဲ့ပါသေးတယ်။နန်းဆုနဲ့ G Fatt တို့ စုံတွဲလေးကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ မအေးသောင်းအခုလို တင်ထားတဲ့အပေါ်မှာ မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြသဖြင့် မအေးသောင်းရဲ့ ပိုစ့်ကို Share ပြီး ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေ နန်းဆုနဲ့ G Fatt တို့ အချစ်ရေးကတော့ ပြဿနာတွေနဲ့ပဲ ကြုံတွေ့နေရတာနော်။Credit-CELE GABAR
တနိုင်းမြို့နယ်တွင် ကျောင်းသူတစ်ဦးကို ကျောင်းသားအုပ်စုလိုက် မဒိန်း ပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား
ရင်သားကိတ်လာခြင်းရဲ့လျိူ့ဝှက်ချက်ကို ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ ဖူးပွင့်ခိုင်
အမျိုးသားဥပဒေနဲ့ ငြိလို့ ဆက်မလွှင့်တော့ပဲ ရပ်သွားဖို့ရှိတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားဗိုလ်ကြီးကား
ချစ်သူက ဘာလုပ်လုပ် ထိုင်ကြည့်ပြီး ပြုံးနေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ